Hurricane Spin Scrubber အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Hurricane spin scrubber\_
– အိမ်တွင်းရှိကြွေပြား /
– toilet ဗိုလ်ထိုင်
– ငါးမွေးကန်များမှ ဂျီးတက် ဂျွတ်တက်နေတာတွေကို ပေါ့ပါး လွယ်ကူစွာနဲ့ ချေးချွတ် ဆေးကြောနိုင်ပါပြီ ရှင့်!
အေးဆေး ခါးမနာ သန်.ရှင်းရေးလုပ်နိုင်မယ့် စက်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေလို. အခုပင် လက်ဆောင် ဝယ်ပေးလိုက်ပါ။
မပင်ပန်းဘဲ basin ရေချိုးခန်း တစ်ခုလုံး လှပဝင်းလက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်နဲ. အားသွင်း အသုံးပြုရတော့ ဓာတ်ခဲ ခဏခဏ လှဲစရာလည်း မလိုတော့ပါ။
30000 kyats (အစုံပါသည်။)
ထိပ်အပို – 10000 kyats (၃ခုပါသည်)
အမည်: Hurricane Spin Scrubber